आज २०७७ मङ्सिर १५ गते सोमबार तपाइको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस – Rapti Khabar
असोज १९, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा थप एक हजार ५३१ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उपत्यकामा थप एक हजार ५३१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौंका ११७८ जना, भक्तपुरका १०३ जना र ललितपुरका […]